Su’aalaha iyo jawaabaha - Finentry
Macluumaad dheeraad ah FINENTRY-adeegga
Baarista feyruuska koroonaha
Su’aalaha iyo jawaabaha
Waa maxay adeega FINENTRY oo sababteed u isticmaalaysaa?
FINENTRY waa adeega dhijitaalka ah oo fududeeya in loo safro Finland oo la maareeyo baadhitaanak korna fayraska looga baahanayo gelitaanka.
Adeega FINENTRY waxa uu u oggolaadaa galayaasha
inay dib u eegaan xayiraadaha safarka ka hor ama muddada u safrida Finland
inay helaan tilmaamo la gaar yeelay oo ah nidaamyada iyo, haddii loo baahdo, baadhitaanka korona fayraska.
qabsashada ballamaha baadhitaanka korono fayraska gudaha Finlan oo bilaash ah.
inay helaan tilmaamaha imaanshaha xaga baadhitaanka
inay helaan natiijooyinka baadhitaanka korona fayraska.
Qofka geliyaa waa uu dedejin karaa nidaamka xaga xadka isagoo ku muujinaya akoonka isticmaalahooda FINENTRY oo kooban telefoonkooda markay yimaadaan Finland.
Adeega waa la cusboonaysiiyaa iyadodo ku sakaysan masuuliyiinta Finland, taas oo fududaysa in la helo tilmaamahii u dambeeyay. Adeegu wax auu ku shaqeeyaa barowsarada, oo waxa uu u isticmaalayaa iyadda si aan khasab ahayn oo bilaash ah.
Waxaad ka soo geli kartaa FINENTRY halkan.
Hagis noocee ah ayaa dadka safraya ka quseeya dadka imaanaya?
Hagista dadka safraya waa la cusbooneeysiin waddan walba oo waa lagu qaadaa dhigi xagga heerka baahista feyruuska koroonaha iyo qatarta faafidda. Waxaad ka hubin kartaa hagistaasi halkaan.
Dhammaan dadka imaanaya Finland, waxaa wali saameeynaya waajibaadka ku xussan xeerka cudurrada faafa iyo tilmaamaha aay mas’uuliyiinta caafimaadka aay bixiyaan.
FINENTRY-adeegga waxuu ku siinayaa tilmaamo shaqsiyadeed ku tusaya sidaad u dhaqmi laheyd. Haddii waddanka imaanshahaagii lagaaga baahan yahay baarista cudurka koroonaha, waxaad haddaba heli doontaa tilmaamo ku saabsan sida loo ballansado baarista bilaashka ah ama kharash la’aanta ah.
Iska diiwaangeli FINENTRY-adeegga oo buuxi macluumaadkaaga ka hor intaadan ku noqon Finland. Adigoo ku soo bandhigaya adeegga FINENTRY-oo ku soo koobaya iyo teleefonkaaga, sidaas ayaad ku fududeeyneeysaa imaatinkaaga waddanka!
Sideen yeelaa haddii Finland baaristii koroonaha ee la iiga qaaday maxsuulka uu yahay positiiv?
Haddii Finland baarista feyruuska ee lagaaga qaaday uu noqdo positiiv, goobta degaankaaga unugga faafidda cudurrada xirfadle ka tirsan ayaa ku soo wacaya kuuna sheegaya tilmaan hagineed.
Waxaan ka safrayaa Finland. Sideen ku heli karaa shahaaddada baaritaanka koroonaha ee safarka?
FINENTRY-adeegga waxaa loogu talogalay dadka Finland u soo safraya, mase ahan ujeeddadu in xagga adeegga ballanta baarista shahaaddada koroonaha oo gooni ah lagu helo. Ka hor safarkaaga dibedda, waxaad ka ballansan kartaa baarista feyruuska koroonaha bixiyeyaasha daryeelka caafimaad ee gaarka loo leeyahay, waxaadna codsan kartaa shahaaddada baaritaanka koroonaha safarka.
Waxaad ka soo dejin kartaa shahaadada natiijada baadhitaanka aan laga helin baadhitaanka korona fayraska ay fulisaya HUS Kymsole, Eksote ama Cusbitaalka Degmadda Waqooyiga Ostrobothnia iyaddoo bilaash ah oo ku qoran Ingiriisi adeega MyCovidData. Adeeggan waxaxaa loogu talogalay muwaadiniinta Finnishka ah, isticmaalkiisana waxuu u baahan yahay aqoonsi adag oo leh aqoonsi bangi ama aqoonsi telefoon.
Intee in la’eg oo waqti hore ah ayaa ballan loo dhigan karaa baaritaanka feyruuska koroonaha?
FINENTRY-adeegga waqtiyada muunad qaadista waxaa lagu cusbooneeysiiyaa muddo 7 maalmood ka hor ah, micnaha waxaad ballansan kartaaa muddo illaa toddobaad ka hor ah.
Maka balansatay baaritaanka fayraska corona adeegga FINENTRY ee lacag la’aan ah?
Haa, baaritaanka fayraska corona ee laga balansaday adeegga FINENTRY oo laga sameeyay Finland waa lacag la’aan.
Miyaa adeegga FINENTRY xaggiisa laga qabsan karaa waqti baaritaanka koroonaha waddanka Finland oo dhan?
FINENTRY-adeegga baraha lagu baaro koroonaha waxeey ku yaallaan goobo kala duwan ee waddanka Finland. Si kastaba ha ahaatee iska ogoow in adeegga FINENTRY goobaha lagu baaro koroonaha aan laga wada helin degmo walba. Adeegga-FINENTRY waxaad ka heli hagis shaqsiyadeed oo ku saabsan hadba sida aay tahay in aad yeesho.
Xiriiriyayaal waxtar leh
Tilmaamaha hey’adda ilaalinta xuduudaha dadka safraya iyo dadka soo galayaba
Safarka iyo cudurka faafa ee koroonaha
Sidee looga gaashaaman karaa feyruuska koroonaha
Su’aalaha iyo jawaabaha safarka iyo feyruuska koroonaha (Wasaaradda arrimmaha deibedda)
Adeeg soo saare: Helsinki University Hospital @HUS
Wadajir ah u wada shaqeeyeen:
Wasaaradda arrimaha bulshada iyo caafimaadka
Waaxda caafimaadka iyo nolol wanaagga
Bayaanka marin u helka
Habbaynta xogta gaarka ah
Waxaan adeegsannaa kuukiska bogga internetka, si aan u hagaajinno khibradaha isticmaalaha. Markaad isticmaaleeysid adeegga waxaad aqbashaa isticmaalka kuukiska. In dheeraad ah ka akhri.